Bilha woo Dan ne Naftali (1-8)
Silpa woo Gad ne Aser (9-13)
Lea woo Isakar ne Sebulon (14-21)
Rahel woo Yosef (22-24)
Yakob nyɛmmoa yɛɛ bebree (25-43)
30 Bere a Rahel hui sɛ ɔnwoo ba biara mmaa Yakob no, n’ani beree ne nua no na ɔka kyerɛɛ Yakob sɛ: “Ma me mma, anyɛ saa a mewu.” 2 Ɛnna Yakob bo fuw Rahel na obisaa no sɛ: “Meyɛ Onyankopɔn a wasiw w’awo kwan* no anaa?” 3 Enti ɔkae sɛ: “Hwɛ, m’abaawa Bilha+ ni. Wo ne no nna na ɔnwo mma me,* na me nso manya mma afi ne hɔ.” 4 Ɛnna ɔde n’abaawa Bilha maa Yakob waree, na Yakob ne no dae.+ 5 Bilha nyinsɛnee, na ɔwoo ɔbabarima maa Yakob. 6 Ɛnna Rahel kae sɛ: “Onyankopɔn adi m’asɛm ama me, na watie me nso ama me ɔbabarima.” Enti ɔtoo no din Dan.*+ 7 Rahel abaawa Bilha san nyinsɛnee, na ɔwoo ɔbabarima a ɔto so abien maa Yakob. 8 Ɛnna Rahel kae sɛ: “Me ne me nua adi asi kɛse, na madi nkonim!” Enti ɔtoo no din Naftali.*+ 9 Bere a Lea hui sɛ ɔnwo bio no, ɔde n’abaawa Silpa maa Yakob waree.+ 10 Na Lea abaawa Silpa woo ɔbabarima maa Yakob. 11 Ɛnna Lea kae sɛ: “Aba yiye!” Enti ɔtoo no din Gad.*+ 12 Ɛno akyi no, Lea abaawa Silpa woo ɔbabarima a ɔto so abien maa Yakob. 13 Ɛnna Lea kae sɛ: “M’ani agye! Mmea bɛfrɛ me nea ɔwɔ anigye.”+ Enti ɔtoo no din Aser.*+ 14 Eduu bere a wotwa hwiit no, na Ruben+ nam na okohuu dudayim* aduaba bi wɔ wuram. Enti ɔde brɛɛ ne maame Lea. Ɛnna Rahel ka kyerɛɛ Lea sɛ: “Mesrɛ wo, ma me dudayim aduaba a wo ba no de bae no bi.” 15 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wugye di sɛ ɛyɛ ade ketewa sɛ wubegye me kunu+ na woasan abegye aduaba a me ba de aba yi?” Enti Rahel kae sɛ: “Saa na woaka a, ɛnde ma me wo ba no aduaba no bi na ɔbarima no ne wo nkɔda anadwo yi.” 16 Anwummere a Yakob fi afuw mu reba no, Lea kohyiaa no kae sɛ: “Wo ne me bɛda anadwo yi, efisɛ mede me ba aduaba ama Rahel de abɔ wo paa.” Enti ɔne no kɔdae saa anadwo no. 17 Na Onyankopɔn tiee Lea na onyinsɛnee, na ɔwoo ɔbabarima a ɔto so anum maa Yakob. 18 Ɛnna Lea kae sɛ: “Onyankopɔn de m’akatua* ama me, efisɛ mede m’abaawa ama me kunu.” Enti ɔtoo abofra no din Isakar.*+ 19 Na Lea san nyinsɛnee na ɔwoo ɔbabarima a ɔto so asia maa Yakob.+ 20 Ɛnna Lea kae sɛ: “Onyankopɔn akyɛ me adepa. Afei de me kunu begye me atom,+ efisɛ mawo mmarima baasia ama no.”+ Enti ɔtoo no din Sebulon.*+ 21 Ɛno akyi no, ɔwoo ɔbabea na ɔtoo no din Dina.+ 22 Afei Onyankopɔn kaee Rahel, na Onyankopɔn tiee no na ɔma onyinsɛnee.*+ 23 Onyinsɛn woo ɔbabarima. Ɛnna ɔkae sɛ: “Onyankopɔn ayi m’aniwu afi me so!”+ 24 Enti ɔtoo no din Yosef,*+ na ɔkae sɛ: “Yehowa de ɔbabarima foforo aka me ho.” 25 Bere a Rahel woo Yosef no, ɛhɔ ara na Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ: “Gya me kwan ma menkɔ me kurom ne baabi a mifi bae.+ 26 Fa me yerenom ne me mma a masom wo anya wɔn no ma me na menkɔ, na wo ara wunim sɛnea masom wo.”+ 27 Ɛnna Laban ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ manya w’anim dom a, ɛnde wo ne me ntena, na mahu nsɛnkyerɛnne* a ɛkyerɛ sɛ Yehowa nam wo so ahyira me.” 28 Na ɔka kaa ho sɛ: “Kyerɛ me akatua a memfa mma wo, na mede bɛma wo.”+ 29 Enti Yakob ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo ara wunim sɛnea masom wo ne sɛnea mahwɛ wo mmoa so yiye;+ 30 ansa na mereba no, na wowɔ mmoa kakraa bi, nanso efi bere a mebaa ha yi, Yehowa ahyira wo ma wɔadɔɔso ayɛ bebree. Enti bere bɛn na me nso menya biribi ama me fi?”+ 31 Ɛnna obisaa no sɛ: “Dɛn na memfa mma wo?” Na Yakob kae sɛ: “Mma me hwee! Sɛ wobɛyɛ eyi ama me a, anka mɛkɔ so ahwɛ wo nguan no na mabɔ wɔn ho ban.+ 32 Mɛfa wo nguan no nyinaa mu nnɛ. Ma nguan a wɔn ho yɛ nsisiinsisii ne damedame ne adwennini nkumaa a wɔn ho bere dum ne mpɔnkye a wɔn ho yɛ nsisiinsisii ne damedame no nnyina faako. Efi nnɛ rekɔ, ɛno na ɛbɛyɛ m’akatua.+ 33 Sɛ ɛba sɛ daakye wobɛhwɛ m’akatua no a, me nokwaredi* bedi me adanse; na sɛ wuhu mpɔnkye a wɔn ho nyɛ nsisiinsisii ne damedame ne adwennini nkumaa a wɔn ho bere dum wɔ me mmoa mu a, na mawia.” 34 Ɛnna Laban kae sɛ: “Eye paa! Ma yɛnyɛ no sɛnea woaka no.”+ 35 Enti saa da no Laban maa mpapo a wɔn ho yɛ nsensanee ne mpɔnkyebere a wɔn ho yɛ nsisiinsisii ne damedame, nea fitaa wɔ ne ho biara, ne adwennini nkumaa a wɔn ho bere dum nyinaa gyinaa faako, na ɔde wɔn hyɛɛ ne mma mmarima no nsa. 36 Afei ɔtew ne ho fii Yakob ho kɔɔ bɛyɛ nnansa kwan. Yakob toaa so hwɛɛ Laban mmoa a ɛkae no so. 37 Ɛno akyi no, Yakob twitwaa duafufu* ne aborɔfo nkate ne kyɛnkyɛn nnua nteaanteaa a ɛyɛ momono, na ɔwaewaee ho nketenkete maa baabi a ɛyɛ fitaa no daa adi. 38 Afei ɔde nnua nteaanteaa a wawaewae ho no guu baabi a mmoa no nom nsu no, na sɛ bere du sɛ anini no foro abere no na wɔba hɔ bɛnom nsu a, wɔahu nnua no. 39 Enti sɛ bere du ma anini no foro abere no wɔ nnua no ho a, wɔwo mma a wɔn ho yɛ nsensanee, nsisiinsisii, ne damedame. 40 Yakob yii nguan mma no kɔɔ nkyɛn na ɔde nguankuw no ani kyerɛɛ adwennini nkumaa a wɔn ho yɛ nsensanee ne damedame a wɔwɔ Laban nguankuw mu no. Ɛnna Yakob yii mmoa a wanya no kɔɔ nkyɛn na wɔamfra Laban de no. 41 Mmoa a wɔn ho yɛ den no, sɛ bere du sɛ anini no foro abere no a, Yakob de nnua no kogu suka no mu faako a mmoa no behu, na sɛ anini no foro abere no a, wɔahu nnua no. 42 Na sɛ mmoa no ho nyɛ den de a, ɔmfa nnua no ngu hɔ. Enti, na Laban mmoa no ho nyɛ den, nanso Yakob mmoa no de, na wɔn ho yɛ den.+ 43 Enti ɔbarima no nyaa ne ho paa, na onyaa nguan ne mfenaa ne nkoa ne yoma ne mfurum pii.+
^ Anaa “wasiw wo yafunu ano a wuntumi nwo.”
^ Nt., “ɔnwo nto me srɛ so.”
^ Ɛkyerɛ, “Ɔtemmufo.”
^ Ɛkyerɛ, “Madi Asi.”
^ Ɛkyerɛ, “Aba-Yiye.”
^ Ɛkyerɛ, “Anigye; Anigyesɛm.”
^ Ɛyɛ afifide bi a ɛte sɛ ntɔmmɔ anaa santom a ɛsow aba. Ná nkurɔfo susuw sɛ ɛma awo.
^ Anaa “ɔpaani akatua.”
^ Ɛkyerɛ, “Ɔyɛ Akatua.”
^ Ɛkyerɛ, “Obegye Atom.”
^ Nt., “Onyankopɔn tiee no na obuee ne yafunu mu.”
^ Ɛyɛ Yosifia a wɔatwa no tiaa. Ɛkyerɛ, “Yah Mfa Bi Nka Ho (Ɔmma Ɛnnɔɔso).”
^ Anaa “me trenee.”
^ Ɛyɛ dua bi a ɛpae nhwiren fitaa.